Sorona Masina ny 24/04/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 24/04/2021
Andriamanitra ô, nohavaozinao tamin’ny loharano fanaovana Batemy ireo mino Anao, koa mba arovy fa efa nateraka indray ao amin’i Kristy; handresy ny hery aelin’ny hevi-diso rehetra anie izy mba hahatahiry ny fahasoavana avy amin’ny tso-dranonao.
Asa 9, 31-42
Niorina ny Fiangonana, ary feno ny fanalana alahelo avy amin’ny Fanahy Masina.
Tamin’izany andro izany, dia niadana ny Eglizy eran’i Jodea sy i Galilea ary i Samaria manontolo fa sady nandroso tsara sy nandeha tamin’ny fahatahorana ny Tompo izy, no nihamaro tamin’ny famporisihan’ny Fanahy Masina koa. Tamin’izay, raha namangy ny mpianatra rehetra isan-tanàna i Piera, dia nankao amin’ny olona masina izay nonina tao Lidà koa, ka nahita lehilahy anankiray atao hoe i Enea, izay nandry teo am-pandriana hatramin’ny valo taona, fa malemy, ary nanao taminy hoe: “Ry Enea; mitsangàna ka amboary ny fandrianao.” Dia nitsangana niaraka tamin’izay izy. Nony nahita azy izay rehetra nonina tao Lidà sy Sarôna, dia nibebaka nanatona ny Tompo avokoa.
Ary tany Jôpe nisy vehivavy anankiray mpianatra atao hoe i Tabita, na hoe Dôrkasy raha adika, izay nahavita asa soa amam-piantrana betsaka. Narary izy tamin’izany andro izany, dia maty; ka nony avy nampandroina ny fatiny, dia napetraka tao amin’ny efitrano ambony. Ary i Lidà moa dia akaikin’i Jôpe ihany; ka ren’ny mpianatra fa hoe ao i Piera, dia naniraka roa lahy ho any aminy izy ireo hangataka azy hoe: “Aza miatoato hankatý aminay.” Dia nitsangana i Piera ka niara-nandeha tamin’ireo. Nony tonga izy, dia nentina tany amin’ny efitra ambony, ka nohodidinin’ny mpitondratena rehetra, izay sady nitomany no nampiseho taminy ny lamba aman’akanjo nataon’i Dôrkasy fony fahavelony. Navoakan’i Piera avokoa ny olona rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, vao nanatrika ny faty nanao hoe: “Ry Tabità, mitsangàna.” Dia nahirany ny masony, ka nony nahita an’i Piera izy, dia niarina. Ary i Piera kosa nanolo-tanana azy, sy nampitsangana azy; dia niantso ny olona masina sy ny mpitondratena, ka nanolotra azy velona tamin’izy ireo. Niely eran’i Jôpe manontolo izany, ka betsaka no nino ny Tompo. Ary i Piera nitoetra andro maromaro tany Jôpe, tao amin’ny mpandon-koditra atao hoe i Simôna.
Salamo 115, 12-13. 14-15. 16-17
Fiv.: Inona no havaliko ny Tompo noho ny soa rehetra nataony ahy?
Inona no havaliko ny Tompo, fa maro dia maro ny soa nataony? Halaiko ny kalisim-pamonjena; hantsoiko ny Anaran’ny Tompontsika.
Hefaiko ny voady iray nolazaiko, hefaiko anatrehan’ny firenena. Tsy zakan’ny Tompo tokoa anie, ny hoe hahafaty izay mino Azy.
Ry Tompo ô, satria aho mpanomponao, satria aho mpanompo matoky Anao. Fa zanaka mpanompovavinao, dia indro ny gadrako esorinao. Hanatitra sorom-pisaorana aho, hiantsoako amy foko ny Anaranao.
Ry Jesoa Kristy, vavolombelona mahatoky sy Lahimatoa amin’ny maty, tia anay Ianao, ary nanasa ny helokay tamin’ny Ranao.
Jo. 6, 61-79
Hankany amin’iza moa izahay? Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay.
Tamin’izany andro izany, raha nampianatra tao amin’ny Sinagôga tany Kafarnaôma i Jesoa, dia nilaza hoe: “Izay mihinana ny Nofoko sy misotro ny Rako no manana ny fiainana mandrakizay.” Betsaka tamin’ny mpianany nony nandre izany no nanao hoe: “Sarotra izany teny izany, ka iza no mahahaino izany?” Ary fantatr’i Jesoa tao am-pony, fa nimonomonona tamin’izany ny mpianany, ka hoy Izy taminy: “Manafintohina anareo va izany? Hanao ahoana ianareo, raha mahita ny Zanak’Olona miakatra any amin’izay nitoerany taloha. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ohatr’inona akory; ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana. Nefa misy tsy mino aminareo.” Fa fantatr’i Jesoa hatramin’ny voalohany, izay tsy hino sy izay hamadika Azy. Ary hoy Izy: “Izany no nilazako taminareo fa tsy misy mahay manatona Ahy raha tsy nomen’ny Ray azy izany.” Hatramin’izay dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra, ka tsy niaraka taminy intsony. Ka hoy i Jesoa tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: “Ianareo koa va mba te-hiala?” Dia namaly i Simôna Piera ka nanao taminy hoe: “Tompo ô, hankany amin’iza àry izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay; ary izahay efa nino sy nahalala fa Ianao no Ilay Masin’Andriamanitra.”
Ray ô, mangataka ho azy ireo Aho mba ho iray ao amintsika koa izy ireo ary mba hinoan’izao tontolo izao fa Ianao no naniraka Ahy. Aleloia.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.5854 s.] - Hanohana anay